I-ICANN ibuphinda kabini ubude beqhosha le-DNS lokhuseleko | Iindaba zeGajethi
I-ICANN ibuphinda kabini ubude besitshixo senkqubo ye-DNS yokhuseleko
Ukuze kwandiswe ukhuseleko kwinethiwekhi, i-Intanethi ye-Intanethi yamagama abelweyo kunye neeNombolo, eyaziwa njenge-ICANN, ibhengeze nje ukuba ukusukela ngoku ukuya kubude obuphambili begama lesizinda lewebhu liza kuphinda-phindwa ukuze kuthintelwe iingxaki ezintsha kwaye Ngaphezu kwako konke ukuqinisekisa lonke ulwazi olushukumayo phakathi kweeseva ze-DNS kunye neekhompyuter ezizibonayo.
Ukuba siyakhumbula, okanye sitsala ngokuthe ngqo iWikipedia, sifumanisa ukuba i-ICANN sele ihlaziye eli qhosha, ngakumbi ngo-2010 xa yayisetyenziselwa ukuhlaziywa kwayo, yayingakhange iguqulwe okoko kwenziwa le khowudi kwii-80s, kwangaxeshanye iseke umgaqo-nkqubo omtsha wezokhuseleko we-DNSSEC ukuze uhlaselo lwe-malware lungaze luvelise naluphi na uhlobo lwesiphumo.
Kuya kufuneka silinde kude kube ngu-Okthobha ka-2017 ukuba le nkqubo intsha iqale ukusebenza.
Ngeli xesha akukhange silinde ixesha elide kwisitshixo, ngobude be-1024 bits, ecetywayo ngo-2010, kuye kwafuneka iguqulwe kwakhona ukuze, ubuncinci, yonyuse ukhuseleko kwinethiwekhi. Yile nto kanye kanye ebhengeziweyo ngabaphandi kunye neenjineli ezisebenzisana nalo mbutho kwaye, emva kophando oluninzi, bagqibe kwelokuba, ngenxa yendaleko enkulu kunye namandla ezifumaneka kwiikhompyuter zakho namhlanje, bekuyimfuneko ukuhlaziya eli qhosha ukuqinisekisa ukhuseleko olwandisiweyo kwi-ransonware.
Okwangoku, xelela nje ukuba isitshixo esitsha esithetha ngaso sele senziwe kwaye sifumaneka kwiiseva ezili-13 ze-DNS eziza kuba noxanduva lokusasaza phakathi kwezinye. Ukuze esi sitshixo sifikelele kuwo wonke umntu, kuya kufuneka silinde phantse unyaka ukusukela oko iyakwenziwa isebenze ngokuqinisekileyo kuye wonke umntu ngo-Okthobha u-2017, nangona inkqubo yangoku izakuqhubeka nokusebenza kude kube ngo-2018.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » I-ICANN ibuphinda kabini ubude besitshixo senkqubo ye-DNS yokhuseleko
I-Adobe VoCo, usetyenziso oluza kukuvumela ukuba uthethe nelizwi lomnye umntu